🥇 ▷ Ukunta Easter-ka ee Android Q wuxuu ka muuqdaa Beta 6 Check! ✅
Ukunta Easter-ka ee Android Q wuxuu ka muuqdaa Beta 6 Check!
The Android Q beta 6 Horey ayay runtii u tahay aaladda qaar la soo xulay oo waxaan kuu sheegnay dhamaan faahfaahinta laxiriirta nooca tijaabada oo dunida lagu tusay mid kamid ah aragtiyaha ugu dhameystiran ilaa iyo hada. Si kastaba ha noqotee, qaar badan oo ka mid ah waxay ahaayeen isticmaaleyaashii filayay biyaha caadiga ee bishii 5aad Ukun Easter in Google badiyaa lagu daro dhamaan noocyadeeda. Hagaag, daqiiqadaas ayaa timid.
Ukunta Easter (ukunta Easter) waxaa lagu qeexi karaa codsiyada caadiga ah ee culeyska hooseeya kaas oo Google badiyaa ay soo bandhigto mowduuca udub dhexaadka u ah soo jiidashada isticmaaleyaasha. Badanaa waa magacyo yar yar oo lagu bixin karo a madadaalada isticmaale iyo in markan ay gaartay beta 6 ee Android Q sidii xuub loo isticmaali karo oo waqti fiican la qaadan karo. Dabcan, waqtigan xaadirka ah sheekadan cusub ayaa lagu arkay Telefoonka Muhiimka ah.
Beta 6 wuxuu furaa Ukunta Easter ee Android Q
Booliska boliiska Android wuxuu ahaa dhexdhexaad khaas ah oo shaaca ka qaaday dhamaan faahfaahinta cusub ee Easter Egg ee Android Q. Beta 6 ee nidaamka hawlgalka ayaa loo doortay Google inuu sii daayo ciyaar istiraatiijiyad yar-yar oo muuqaal ah oo ka kooban dib u habeynta halxiraalaha si loo helo Astaanta nooca. Xilligan, codsigan waxaa lagu heli karaa oo keliya taleefanka Aasaasiga ah, iyo qaar badan oo ka shakisan inay tahay horumarin shirkadeed si loo helo wax yar oo caan ah.
Si aad ugu raaxaysato arjigan waa inaad raacdaa nidaamka caadiga ah ee ka dhacaya dhammaan marinnada ay ku shaqeeyaan Android oo ah nidaam hawlgal ah. Si fudud u riix oo qabo nooca Terminalka Android, kiiskan Beta 6, iyo ilbidhiqsiyo gudahood ayaa masawir cusub soo muuqan doona isagoo muujinaya halxiraalayaal ku saleysan tirooyin dhowr ah oo aan ku qasbanaan doonno waafajisaa astaamaha uu Google u adeegsaday noocaan ilaa wajigii koowaad ee imtixaanka. Marka xigta, waxaan kaliya ku qasbanaan doonaa inaan dhowr jeer riixno qaybtaan si aan u helno halxiraale kaas oo sumadda nidaamka dib u soo bilaabaneysa.
Waqtigan xaadirka ah, shirkadda Mountain View ma aysan xaqiijin in kani yahay minigame rasmiga ah ee noocaan. Waa inaan sugnaa illaa bixitaanka rasmiga ee Android Q si loo xaqiijiyo xogtaan. Dabcan, wali lama oga waxa uu noqon doono magaca nacnac ee Google ay go’aansatay munaasabaddan. Aynu aragno waxay ka fikiri karaan…
Xigasho | Booliska Android